गीत/संगीत Archives - Page 21 of 46 - Purbeli News
करिष्मा ढकालको ‘चोली तुनाले’ (भिडियाे सहित)
काठमाडौ/ नेपाली लोकदोहोरी गितको क्षेत्रमा योगदान पुयाउनको लागी नयाँ सर्जक तथा प्रतिभावान कलाकारको आगमन निरन्तर रुपमा भैरहेको छ । यसै क्रममा प्रकाश खप्तरी मगरको शब्द सिर्जनामा ‘चोली तुनाले’ को भिडियो म्युजिक नेपालको युटुव च्यानल मार्फत सार्वजनिक भएको छ । नेपाली गाउँघरका मौलिक भाकालाई गितमा समेटने प्रयास गरिएको छ । मायाको अभावमा संसार नै बेग्लै भ...
पूर्वेली ठिटोलाई एलिसा राईको झट्का लागेपछि (भिडियाे सहित)
मोडेल एलिसा राईको रुपको झट्का मोडल गंभीर बिष्ट र ‘ह्याण्ड टु ह्यान्ड क्रु’ का युवाहरुलाई लागेको हट म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । यसै हप्ता युट्युवमा सार्वजनिक भएको उक्त भिडियो युवाहरुको रोजाईमा परेको छ । पूर्वेली इलाम मंगलबारेका गायक बिमल गौतमको उक्त भिडियोलाई नवराज उप्रेतीले छायंकन गरेका छन् भने गंभिरले निर्देशन गरेका छन् । गायक स्वयम र प्रकाश...
स्वर्गीय गायक कुमार कान्छाको अन्तिम गीत सार्वजनिक (भिडियो)
काठमाडौं । स्वर्गीय गायक कुमार कान्छाले गाएको गीत ‘छाडि गए आमा तिमीलाई’को भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गायक कान्छाको निधन हुनुभन्दा केही वर्षअघि रेकर्ड भएको गीतको भिडियो भने हालै निर्माण भएको हो । सन्देश सोङ्मेन राईको शब्द र भूवन सुप्तिहाङ राईको संगीत रहेको गीतको भिडियोमा मोडल दिक्पाल कार्की र उमेश राई (फूलन्देकी आमा)को अभिनय रहेको छ । कृष्ण आचार्य...
गायिका मेलिना किन भईन निराश ? (भिडियो)
नेपाली संगीत क्षेत्रकी चर्चित गायिका मेलिना राईले धेरै वटा रमाईला र स्रोतालाई नचाउने गीत गाएकी छिन् । तर शुक्रबार उनको नयाँ सेन्टिमेन्टल गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । मिठो स्वरकी धनी गायिका मेलिना निराश भावमा गाउँछिन् ‘तिमीले छाडी गएपछि, हाम्रो नाता टुटेपछि....।’ मेलिनालाई यस्तो सेन्टिमेन्टल भावको गीत गाउन लगाएका हुन् संगीतकार महेन्द्र राई...
निशानका फ्यानलाई खुशीको खबर, बाहिरीयो पहिलो गीत
लोकप्रिय रियालिटी शो नेपाल आइडलका फस्ट रनरअप निशान भट्टराईको पहिलो गीत बाहिरीएको छ । नेपाल आइडलपछि व्यस्त बनेका निशानले गाएको पहिलो गीतको भिडियो बाहिरीएको हो । नेपाल आइडलको स्टेजबाट दर्शकको मन जित्न सफल निशान ‘आफ्नै छायाँसँग पनि’ बोलको गीतमार्फत निशानको कला र गला पहिलो पटक देखिएको हो । उनको नयाँ गीतको पर्खाइमा रहेका करोडौँ फ्यानका लागि निशानक...
गायिका मेलिना किन भईन निराश ?
काठमाडौं । नेपाली संगीत क्षेत्रकी चर्चित गायिका मेलिना राईले धेरै वटा रमाईला र स्रोतालाई नचाउने गीत गाएकी छिन् । तर शुक्रबार उनको नयाँ सेन्टिमेन्टल गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । मिठो स्वरकी धनी गायिका मेलिना निराश भावमा गाउँछिन् ‘तिमीले छाडी गएपछि, हाम्रो नाता टुटेपछि....।’ मेलिनालाई यस्तो सेन्टिमेन्टल भावको गीत गाउन लगाएका हुन् संगीतकार म...
चलचित्र लुट २ बाट चर्चामा आएकी नायिका एलिसा राईको नयाँ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । मोडल निराजन प्रधानसँगको रोमान्टिक भिडियो सार्वजनिक भएको हो । जाउँ हिँड मैच्याङ बोलको सेलो गीतको भिडियोमा वि.पी. हाईवेका मनोरम दृश्य समावेश गरिएको छ । दर्शन लामाको स्वर रहेको गीतको भिडियोमा एलिसालाई निराजनले ट्रकमा भगाएको देखाइएको छ । जहाँ उनीहरुको रोमान्टिक ...
राजेन्द्रको ‘कहिले कांही. सार्वजानिक
गायक राजेन्द्र राईको ‘कहिले काँही...’ गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजानिक भएको छ । गायक स्वयंमकै शब्द÷संगीतमा तयार भएको म्यूजिक भिडियो अमेरिकाको न्यूयोर्कमा खिचिएको हो । ड्रिम्स गेट इन्टरटेइमेन्ट मार्फत् युट्युवमा ल्याइएको यस भिडियोमा पार्वती राईले फिचरिङ गरेकी छिन् । पार्वतीको अलवा जग्गु सेर्पा, कृष थापा र अनिका राईले अभिनय गरेका छन् । ...
ट्रेन्डिङमा लिलिबिली, रुचाईयो ‘प्रदिप र जसिता’लाई (भिडियो सहित)
प्रतिक्षित मानिएको चलचित्र ‘लिलिबिली’ को पहिलो गीत सार्बजनिक भएको छ । सार्बजनिकको २४ घण्टा नबित्दै भिडियोले निकै सकारात्मक प्रतिक्रिया बटुलेको छ । हामिले यो समाचार तयार पार्दासम्म भिडियोलाई २ लाख ७५ हजार बढी पटक हेरिसकिएको छ । हेर्नुस् भिडियो । सार्बजनिक भिडियोमा नायक प्रदिप खड्का र नव नायिका जसिता गुरुङ फिचर छन् । उक्त भिडियो नेपालमा सर्बाधिक ह...
शिल्पाको माया लागेपछि यस्तो गरे दुर्गेशले, भिडियोमा हेर्नुस्
नेपाली साङितिक आकाशमा हरेक दिनजसो अडियो तथा भिडियो सार्बजनिक भैरहेको हुन्छ । यस्तैमा एक भिडियो गीत सार्बजनिक पनि सार्बजनिक भएको छ । नेपाली रंगिन दुनियामा आफ्नो छुट्टाछुट्टै पहिचान बनाएका कलाकार भिडियोमा फिचर छन् । सार्बजनिक ‘तिम्रै माया लाग्छ’ बोलको गीतलाई रेगान एलएक्सले आवाज दिएका छन् । डान्सिङ बिटको पप आधुनिक गीतमा टंक बुढाथोकीको शब्द तथा संगी...